Ebumnuche 5 Maka Ihe Nkịta Ji Rie Poop & Kwụsị Ha - Ahụike
Ebumnuche 5 Maka Ihe Nkịta Ji Rie Poop & Kwụsị Ha
Coprophagy bụ ụzọ ọrụ aka nke ịsị na nkịta na-eri nri nke ha ma ọ bụ nkịta nkịta ndị ọzọ, ọ dịkwa ọtụtụ karịa ka ị nwere ike iche!
Na-akpali mmasị, na 1940s na 60s ọmụmụ banyere oke tụrụ aro ka ha rie nsị nke ha n'ihi njikọta vitamin.
N'ihi ọmụmụ ihe ndị a, ọtụtụ ndị nwe nkịta na-eche na nkịta na-eri nsị n'ihi na ha nwere ụkọ ihe. Ma, ha ezighi ezi.
Enwere obere ihe na agwa a mara oke mma, yabụ ka anyị gwuo obere omimi ...
Gini mere nkita ji eri nri?
Kedu ihe kpatara nkịta ji eri okpokoro okpokoro?
Kedu ihe kpatara nkịta ji eri anụ mgbada?
Gịnị kpatara ụmụ nkịta na-eri nri?
Kedụ ka m ga-esi nweta nkịta m ka ọ kwụsị iri poop?
Nri Poop ọ dị njọ maka nkịta?
Iri nri nsị na-adịkarị na nkịta, oke, rabbits, Guinea pigs na chinchillas.
Ọtụtụ ndị nwe ha na-ahụ nkịta ha na-eri nsị, a na-akpọ ndị na-eri nri canine na-ekwu maka ọgwụ kwa ụbọchị.
Vefọdụ vets na-arụ ụka na ọ bụ ihe ịrịba ama nke okwu ahụike metụtara dị ka enweghị ike pancreatic; nke a bụ ebe enwere enzymes digestive na-efu nke na-emetụta nkịta gị ịnwe ike ịmịkọrọ nri.
Ọ bụrụ na nkịta gị na-egosi mgbaàmà ndị ọzọ nke erighị ihe na-edozi ahụ n'akụkụ coprophagy, mgbe ahụ ị kwesịrị ịchọ ndụmọdụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ.
Otú ọ dị, n'ọtụtụ ọnọdụ ihe kpatara nkịta ji eri nsị abụghị nsogbu ahụike, mana ọ bụ okwu gbasara mmụọ.
Studies kwuru na ọ nwere ike ime na nkịta na-agwụ ike n'ihi na ha na-atọ ọchị onwe ha ma ọ bụ na-achọ nlebara anya.
Ọtụtụ ndị nwe ha enweghị mmasị na nkịta na-eri nsị, n'ihi ya, mgbe ha hụrụ ya, ha na-elebara nkịta ha anya n'agbanyeghị na ọ bụ mmekọrịta na-adịghị mma.
Otú ọ dị, iji nweta njikwa nke ezi ihe kpatara ya, otu ọmụmụ mụụrụ nke na-ele nri nke nkịta na-eri nri. Ihe omumu a lebara anya na ulo-ozuzu ulo, otu esi eri nri nkita, na ihe mgbanwe nke agwa ejiworo nke oma.
Nnyocha a chọpụtara na nri nke nkịta enweghị mmetụta dị ịrịba ama, na-atụ aro enweghị ihe ndabere na-edozi ahụ maka omume ahụ.
Tụkwasị na nke a, ọ chọpụtara na nkịta na-eri nsị bụ ndị a zụrụ azụ n'ụzọ dị mfe dị ka nkịta ndị na-abụghị ndị na-ahụ maka ndị ọzọ ma ka na-enwekwa nsogbu nke ịjụ nri.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nkịta ndị riri nsị nke ha, ka akọwara ngwa ngwa dị ka ndị anyaukwu na-eri ihe na ọnụego ihe ịga nke ọma nke mgbanwe omume iji kwụsị ha dị nso na efu.
Enwere obere ihe akaebe na-egosi ihe ndabere maka nri maka nkịta na-eri nsị nkịta ọzọ . Ihe kachasị mkpa maka nkịta na-eri nsị gụnyere:
Anyaukwu na-eri nri
Otu izu (hound na terriers nwere ike ime ya)
Ọtụtụ nkịta nọ n'ụlọ
Iri oche cat
O yighi ka ọ dị ihe dị iche ma ha na-eri nke ha, ma ọ bụ nkịta nkịta ọzọ - ọ bụrụ na ha ga-eri ya, ha ga-eri ya!
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na nkịta dị ka nsị nke anụmanụ ọzọ na-enyekwu ìhè na echiche kpatara omume a.
Nkọwa kachasị dị na ya bụ ihe ọ bụla nwamba na-etinyebeghị anya n'oge nri ha, na-adọta nkịta.
N'ime ụfọdụ nri nwamba azụmahịa agbakwunye abụba ime ka nri rie nne. Anaghị abụba abụba a mgbe niile site na pusi, ya mere, ọ na-apụta na nsọtụ ọzọ.
A na-agbakwunye abụba maka ịmịcha mma, nsị pusi na-abụkarị ihe abụba. Naanị cheta, abụba nwere ike ịdị mma ma dị njọ, dabere na isi mmalite ya!
Mgbe gị na nkịta gị na-eme njem, ọ nwere ike ọ ga-ahụ ele ma ọ bụ poopu ịnyịnya. Ma, gịnị mere o ji nwee mmasị na ya? Nkọwa nwere ike ịdabere n'omume iri nri ha!
Enwere otutu nkwekorita why dog ​​ji eri ahihia . Ma, na ịnyịnya na mgbada bụ ahịhịa ndị ọkà mmụta sayensị na-eche ma ọ nwere njikọ abụọ? Nkịta nwere ike n'ezie na-achọ ihe ọkụkụ nke ahịhịa mgbada.
Azịza nke ajụjụ a na-akpọghachi anyị na nkịta anyị malitere n'oge ochie.
Kemgbe ụwa, iri nri so na na-achịkwa nje ndị ọzọ . Ngwongwo ihe ọkụkụ na-agabiga na eriri afọ, na-agbanye ikpuru ma si otú ahụ kpochapụ ha.
A ga-ahụzi nje ndị ahụ na nsị, nke na-eduga anyị na ihe ọzọ kpatara nkịta ga-eji rie nsị, iji gbochie oghere ha pụọ ​​na nje.
Nke a bụkarị ụmụ nkịta na-eto eto bụ ndị ga-apụ apụ na igbe ụkwụ ha ma mama ha ga-eri nsị iji wepụ ya.
Nke a na - eduga anyị n’ọmarịcha àgwà nke ọtụtụ ụmụ nkịta nwere, na-eri nsị! Ọ gbasaghị ha, nke ha, onye ọzọ na-eri nri, nne ha na ọbụnadị nsị anụmanụ ọzọ.
Nke a ọ bụ omume e coomi sitere n'aka nne ha? Ma obu, ha di umu nkita?
Ọtụtụ ụmụ nkịta ga-agafe n'ogologo nri nri. Vets na-eme nnyocha na-ekweta na nke a dị nnọọ akụkụ nke ha njem na ngagharị nkebi.
Dị ka ụmụ ọhụrụ, ụmụ nkịta na-enyocha ihe niile jiri ọnụ ha , na-ele anya na aka na akwa ụkwụ trouser nke onye ọ bụla nwe nkịta ọ bụla!
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụmụ nkịta na-ahụkarị, ọmụmụ ihe egosila na coprophagy abụghị omume ụmụaka akọwapụtara yana ọ dịka ọ na-adịkarị na nkịta ndị okenye.
Ọ dịghị emetụta afọ nkewapụ ya na nne ya, nke bụ oge ụfọdụ aro dị ka ihe kpatara ya .
Ọ bụrụ na nwa nkịta gị na-eri nsị, o yikarịrị ka ọ ga-eto na ya ka ọ na-eto (n'etiti ọnwa 12 na 18).
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ nọgide na-eme omume ahụ ruo ogo mmadụ, ọ nwere ike ịga n'ihu na ndụ ya niile: belụsọ na ị batara.
Ọ bụrụ na nwa nkịta gị na-eri nri afọ, gbalịa dọpụ uche ya n'ihe ndị ọ nwere ike inyocha, taa ma rie.
O bu ihe nwute, otutu mmezighari omume enwezighi isi na nkwusi omume a maka ndi nkita di ogologo. Ebe enwere ike ibelata ntakịrị oge ugboro obere, akparamagwa na-alọghachigha.
Ejirila ihe oriri na mkpụrụ ọgwụ iji kwụsị omume ahụ ma nwee ọganiihu nke ọma (n'etiti 0-2%).
Methodszọ ndị ọzọ iji gbochie omume ahụ gụnyere: ịchụpụ stool na iji oche etinye lacing stool. Akụkọ a rụpụtara anọwo 1-2% .
Nhọrọ kachasị mma maka ịkwụsị nkịta ka ọ ghara iri nsị bụ ịkụzi iwu 'hapụ ya' nke nyere ọnụọgụ ihe ịga nke ọma 50%.
Kụzi “hapụ ya!” iwu:
Malite na ọgwụgwọ na aka gị ma kechie ọkpọ gburugburu ya
Nkịta gị nwere ike ịmịchaa ihe omume ahụ
Mechie aka gị
Ozugbo ọ tụgharịrị ma ọ bụ gosi obere mmasị, nye ya ọgwụgwọ ahụ
Tinyegharịa kwa ụbọchị maka ụbọchị ole na ole sochirinụ
Ozugbo ọ tụgharịrị ma ọ bụ leghara omume ahụ anya, kpọọ omume ahụ
Nwere ike ịga n'ihu inye onyinye ahụ n'aka ghe oghe ma nyekwa ya n'ala
Olileanya bụ inwe ike ịrịọ maka omume ahụ, nkịta gị na-eme ya. Ọ na-amụta site n'ileghara ezi ihe anya, ọ na-enweta ezigbo ihe agbanyeghị. Ya mere, ọ bụrụ na ọ leghara nsị anya, ị kwesịrị ịkwụghachi ya ụgwọ maka ime nke a.
Dika enweghi obere ihe akaebe nke na-egosi na enweghi ihe oriri maka nri nri, ọ dịghị ezi nzube na-agbakwunye mgbakwunye na nri nkịta gị.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ihe oriri na-edozi ahụ nke nkịta gị, gwazie onye na-edozi ahụ ma ọ bụ dọkịta gị. Enwere ike ịnwale ule ọbara iji hụ nnukwu erughị eru.
Iri pap bụ ezigbo agwa karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Otu nsị ọ bụla ga-ebu ibu nje. Yabụ, maka nkịta ndị ahụ nwere usoro nsị na-esighị ike, nke a nwere ike ibute iwe nke afọ. Otú ọ dị, a na-ahụkarị coprophagy na ndị na-eri nri anyaukwu na ndị na-eri unyi, yabụ na enwere ike, ha enwetala eriri afọ!
Azịza ya ga-adaberekwa na nsị ndị ha na-eri ; ihe onye nnabata eri, ma enyere ha ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ọgwụ nje na ngwụcha ihe mejupụtara.
Na-akpali mmasị, nsị nsị abụrụla ọgwụgwọ dị irè na nsogbu ụfọdụ na nkịta.
Ntughari bu ebe anaputara onye na enye onyinye di ike ma nyekwa ya onye obula oria. N'ihe banyere colitis na afọ ọsịsa na nkịta, a hụla mmezi n'ime ụbọchị 2-3 nke transplant
A na-eche na ahụ ike repopulates eriri afọ , na-enyere nkịta aka ịgwọ ọrịa nsị ha.
Nke ahụ kwuru, ihe nlere ndị ahụ gafere nyocha siri ike, yabụ anyị anaghị ekwu na ị ga-ahapụ ka nkịta gị rie nsị ọ bụla ọ hụrụ!
Oke na oke bekee bụ ndị na-eri nri nsị oge niile; ha kwesịrị maka vitamin njikọ. Ma nkịta gị abụghị oke bekee ma ọ bụ oke.
Achịcha nri a na-ahụkarị na ụmụ nkịta, ọ dị ka ọ bụ akụkụ nke ihe omimi ha! Ha ji onu ha nyocha. Mana ọtụtụ ụmụ nkịta na-eto na ya.
Ihe kachasị kpatara nkịta ji eri nsị nwere ike bụrụ na ha bụ ndị anyaukwu, ndị na-eri anụ, ndị na-eri anụ, ndị na-eri unyi ma ọ bụ ndị bi n'ụlọ!
Enwere obere ihe akaebe na-atụ aro ihe ndabere maka omume a, mana ọ nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke okwu ahụike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ejikọ ya na ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke erighị ihe na-edozi ahụ.
Fọdụ vets na-arụ ụka na omume a bụ nke uche. Pụtara, nkịta gị na-agwụ ike ma ọ bụ na-achọ nlebara anya. Ndị ọzọ na-atụ aro na ọ bụ ndị nna ochie karịa n'ihi na nkịta gaara eri nri poo iji mee ka ọnụ ha dị ọcha ma sachapụ nje ndị ọzọ.
Enweghi ihe ịga nke ọma na igbochi omume ahụ site na ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ. N'otu aka ahụ, ịchụ nkịta pụọ ​​na stool ma ọ bụ inye ya ntaramahụhụ maka iri ya na-enye ha nlebara anya ha chọrọ. Na-akụzi ka ịhapụ aha ya.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị àgwà kachasị mma nke nkịta nwere, ọ na-enwe obere ihe egwu ọ gwụla ma ha na-eri nsị nke anụmanụ na-eri ọtụtụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ọgwụ ahụhụ.
kedu ihe nkịta m ji akpọnwụ akpọnwụ na ụkwara
oke collie na aussie mix
nkịta na -ekpo ọkụ na aka
ngwakọta pitbull na nwa nkịta labrador